အားလူး ဆလတ်သုတ် | Wutyee Food House
« ထိုင်းစတိုင် ပဲကြာဇံသုတ်
Chicken Ala King ဟင်း »
March 29, 2010 by chowutyee အားလူး ဆလတ်သုတ်
အနောက်တိုင်း အားလူးဆလတ်သုတ်က လူကြိုက်များတဲ့ နံမည်ကြီး အစားအစာတစ်ခုပါ။ လုပ်ရလွယ်ပြီး စားလို့လည်း အရမ်းတာမို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်…
အားလူး ဆလတ်သုတ်မှာ ပါဝင်သောပစ္စည်းများ
၁။ အားလူး – ၄လုံး ( နူးအိအောင် ပြုတ်ပေးပါ)
၂၊ ကြက်သွန်နီ – ၁လုံး (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၃။ မရိုနစ် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၄။ White wine vinegar – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၅။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
၇။ ကြက်သွန်မြိတ် – ၁စည်း
၈။ သံလွင်ဆီ (Olive oil) – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၉။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၁မွှာ (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၁၀။ ကြက်ဥ – ၁လုံး ( ကြက်အောင် ပြုတ်ပေးပါ ) (ထည့်ချင်က ထည့်နိုင်သည်)
၁။ ပြုတ်ထားသော အားလူးကို အခွံနွာ၍ အ၀ိုင်းလေးများလှီးလိုက်ပြီး ခွက်တစ်ခုထဲ ထည့်ထားပေးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် French Dressing အတွက် (ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ မရိုနိစ်၊ White wine vinegar ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ဆား၊ ကြက်သွန်မြိတ်) အားလူးထည့်ထားသော ခွက် တစ်ခု ထဲထည့်လိုက်ပါ။
၃။ ပြီးမှ French Dressing နှင့် သံလွင်ဆီ ကို အာလူးပန်းကန်ထဲထည့်ပြီး အားလုံးကို သမအောင် ရောနုယ်လိုက်ပါ။
၄။ ပြီးမှ ကြက်ဥကို အ၀ိုင်းလေးများလှီးပြီး အပေါ်မှ တင်လိုက်ပါ။
၄။ အနောက်တိုင်းစတိုင် အားလူး ဆလတ်သုတ်ကို မြည်းသွားကြပါအုန်းနော်…
မှတ်ချက်။ ။ bacon ထည့်ချင်ကထည့်နိုင်ပါသည်။
Posted in အနောက်တိုင်း ချက်ြ့ပုတ်နည်း | 13 Comments	13 Responses
on March 29, 2010 at 8:26 am | Reply Hmone Gyi
it is one of my favourite😉 potato salard…i eat once at leastaweek
on March 29, 2010 at 8:37 am | Reply chowutyee
ကိုယ်လုပ်ပေးတဲ့ အားလူးဆလတ်သုတ်လေးတောင် သတိရတယ်..း(
on March 29, 2010 at 12:44 pm | Reply နွေးနေခြည်
ဟယ်.. ဝလာတော့မှာပဲ.. ဟိး)
on March 30, 2010 at 4:40 am | Reply chowutyee
သေချာတာပေါ့ နေခြည်ရယ်.. ခုတောင် ၀လာလို့ဝိတ်လျှော့နေရတာ..😛
on March 29, 2010 at 12:48 pm | Reply leo
အားလူးသုပ် လေးစားသွားတယ်။။ အညာသားဆိုတော့ ရေနွေးကြမ်း လေးနဲ့ မြည်းလိုက်ရ ရင်တော့ သူ့လောက်ကောင်းတာတောင် သူ့လောက် မကောင်းဘူး။း)
on March 30, 2010 at 4:42 am | Reply chowutyee
အနောက်တိုင်း ဆလတ်သုတ်ကို ရေနွေးကြမ်းနဲ့ မြည်းမလို့လား Leo ရဲ့..း)
on March 29, 2010 at 1:03 pm | Reply Evy
၀တ်ရည်ရေ စားချင်စရာပဲ။ လုပ်စားဦးမယ်။ နည်းအတွက်ကျေးဇူးနော်။
on March 30, 2010 at 4:46 am | Reply chowutyee
on March 29, 2010 at 9:38 pm | Reply zaw
အာလူးသုပ်လေး ကောင်းပါတယ် ဘယ်နိုင်ငံ ကအစားစာလေးလဲးဆိုတာကို ပြေားပြပါလား ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ.အခါမှာ ဒါလေးက ဘယ်နိုင်ငံရဲ.အစားစာ ။ မ၀တ်ရည် ရဲ. ဘလော.လေးမှာ ရှိနေတယ်လို. တခြားလူတွေကိုပြောလို.ရတာပေါ. ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ။
on March 30, 2010 at 5:11 am | Reply chowutyee
ဇော်ရေ ပြင်သစ် အာလူးဆလတ်သုတ်ပါ။ French Dressing နဲ့သုတ်ထားတာကို ထည့်ရေးဖို့ ကျန်ခဲ့လို့ ပြန်ဖြည့်ထားပေးပါတယ်နော်..း)
on March 30, 2010 at 3:59 am | Reply astk
btw how come its under မြန်မာချက်ပြုတ်နည်းများ🙂
on March 30, 2010 at 4:39 am | Reply chowutyee
ဆောရီး.. မှားတင်မိလို့.. အနောက်တိုင်း ချက်ပြုတ်နည်းထဲ ပြန်ထည့်ထားလိုက်ပြီး..😉
on May 10, 2012 at 3:06 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] March 29, 2010 အားလူး ဆလတ်သုတ် […]